Taxanaha ugu fiican DWZ ee rotor -ka bannaanka qulqulka marawaxadaha soo -saaraha iyo Warshadda | Lang Tai
DWZ taxane taageere socodka axial rotor dibadda
DWZ taxane taageere qulqulka qulqulka dibadda ee rotor -ka waa nooc cusub oo marawaxad qulqulka qulqulka ah oo aan horumarinno oo aan ku raaxaysanno xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee lahaanshaha. Astaamaheeda ayaa ah matoorku waa mashiin koronto oo rotor dibadeed leh oo leh garbaha iyo xarkaha mesh oo si toos ah loogu hagaajiyay mootada; matoorku wuxuu leeyahay qaab -dhismeed is haysta oo si sahlan loo rakibi karo. Naqshadeynta daabacaha iyo rakibidda waxay la jaanqaadeysaa mabda'a firfircoonida, waxay gaarto buuq aad u sarreeya oo hooseeya. Taageeraha ayaa si weyn loogu adeegsan karaa qaboojiyaha, is -dhaafsiga kuleylka, hawo -qaadashada iyo beeraha kale. Faahfaahinta waa sida soo socota:
Sharaxaadda Tusaalaha Fan
Qaab -dhismeedka badeecada iyo Sharaxaada
Taageeraha qulqulka axial sida ku cad sawirka 1 wuxuu ka kooban yahay mootada rotor -ka weligeed ah, garbaha, xayndaabka mesh iyo qurxinta.
1. Darajada ilaalinta ee matoorka rotor-ka ee dibedda ah waa IP44 iyo darajada dahaarku waa F. Rotor-ka ka samaysan daawaha aluminium-ka-shubistu waa qaab dhismeed, fududahay in la rakibo oo muuqaal ahaan qurux badan.
2. Daloolka dahaarka leh ee 4.0-6.3# waxaa laga sameeyey daawaha aluminium oo tayo sare leh iyo 7.1-8.0# waxaa laga sameeyey daawaha aluminium-kabka ah. Garbaha guluubka waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan mabda'a aerodynamic waxaana si toos ah loogu dhejiyay rotor -ka. Darajada saxnaanta dheelitirka waa G5.6.
3. Carwadu waxay ka samaysan tahay xaashiyo bir ah oo duudduuban (waxaa bixin kara dadka isticmaala). Carwadu waxay hagaajin kartaa kartida marawaxadda.
4. Xayndaabka mesh waxaa lagu xardhay silig bir ah oo si toos ah loogu hagaajiyay mootada. Waxay badbaadin kartaa taageere.
5. Daaweynta buufinta rinjiga iyo budada ayaa lagu sameeyaa dusha mootada, garbaha, xayndaabka mesh iyo qurxinta, kordhinta miridhku iyo iska caabinta daxalka.
Sharaxaadda Rakibaadda Badeecadda
1. Taageerayaashan taxanaha ah waxaa lagu rakibi karaa laba qaab: nuugista hawada bilaashka ah iyo dhammaynta hawo bilaash ah. Shuruudaha gaarka ah waxaa lagu muujiyey Jaantuska 2 iyo 3:
1. Xogta ku taxan tusaalaha waxaa lagu cabbiraa xaaladaha caadiga ah, taas oo ah, cadaadiska jawiga = 101.325 kPa, cufnaanta gaaska = 1.2 kg/m3, iyo heerkulka gaaska = 20 ° C.
2. Sawaxanka marawaxadda waxaa lagu cabiraa meesha 1 mitir u jirta meesha laga soo galo hawada ee dhidibka gelida hawada sida waafaqsan heerka qaranka.
3. Awoodda, xawaaraha hadda iyo wareegga ee mootada ayaa lagu qiimeeyay qiimaha.
4. Heerkulka cimilada ee taxanaha taageerayaasha waa: -30 ℃ ~ +60 ℃.
Markaad dalbanayso, fadlan sheeg:
-Qaab taageere dhammeystiran,
-Jihada marin -haweedka,
-Haddii ay tahay in lagu qalabeeyo baaritaanka ilaalinta,
-Qoyaanka hawada ee la socda,
Goobta rakibidda (hawo qoyan ama bannaanka)
-Iyo noocee ah kiimikooyinka kiciya hawada.
- Danab gaar ah iyo soo noqnoqosho
- Sanduuqa isgoyska ee aan caadiga ahayn
- Dabool difaac oo gooni ah
- Fiilada dheer
- Heerka heerkulka hooseeya
- Dahaar gaar ah (varnish ama rinji)
Xusuusin: Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno xuduudaha waxqabadka taageere iyo cabirka qaab dhismeedka ogeysiis la'aan.
Hore: EUROVENTILATORI AXIAL FANS.
Xiga: LKZ Taxanaha Taageeraha qulqulka Axial